Ikamelo elakhelwe ngaphansi e-Fairfax City - I-Airbnb
Ikamelo elakhelwe ngaphansi e-Fairfax City
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Fruz
U-Fruz Ungumbungazi ovelele
Igumbi elingaphansi kwesitudiyo elizimele elinendawo yokungena ezimele endaweni ephephile futhi enokuthula. Indlu iphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo (imizuzu engu-10 kuya kwengu-15) ukuya ezitolo ezinkulu zokuthenga kanye nezindawo zokudlela ezihlukahlukene. Lezi zihlanganisa i-CVS, i-Aldi, ama-Starbucks, i-Chipotle ne-McDonald 's phakathi kwabanye. Indawo ekahle kakhulu yabantu abahamba ngebhizinisi nabantu abadala abasebasha. Le ndawo ilungele abantu abashadile, abahamba bodwa nabafundi.
Indawo inekhishi elilungisiwe elinefriji elikhulu, indawo yokusebenzela ethule, umshini omusha wokuwasha nokomisa, i-TV ene-Netflix, itafula lokudlela, i-closet enkulu ne-wifi enejubane elikhulu. Kunendawo enkulu yokupaka emgwaqweni engenayo imvume edingekayo.
Indlu iphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo (imizuzu engu-10 kuya kwengu-15) ukuya ezitolo ezinkulu zokuthenga kanye nezindawo zokudlela ezihlukahlukene. Lezi zihlanganisa i-CVS, i-Aldi, ama-Starbucks, i-Chipotle ne-McDonald 's phakathi kwabanye. Sisekude ngamakhilomitha angu-1-2 ukusuka emtapweni wolwazi wesifunda, izitolo zokuthenga (i-Wegmans, Imakethe Yabalimi) kanye nendawo yemidlalo yaseshashalazini. Uma ungumfundi noma uya engqungqutheleni, sisekude ngemizuzu engu-5 ngemoto ukusuka e-George Mason University.
Sihlezi sitholakala ukuphendula imibuzo yakho.
UFruz Ungumbungazi ovelele